ဗနျဒီဘိချကို ဆိုးလျရှား ဘာတှမေကမြေနပျဖွဈနတောလဲ…? – MAN U FAN CLUB
နှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာတုနျးက ဆိုးလျရှားရဲ့စကားကို ယုံကွညျပွီး အသငျးမပွောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ ဗနျဒီဘိချဟာ
အခုအခြိနျမှာတော့ ပှဲထှကျခှငျ့မရတဲ့ အရံခုံထိုငျကစားသမားဘဝကိုအတျောစိတျပကျြနခေဲ့ပါပွီ။
ဗီလာရီးရဲလျနဲ့ ပှဲမှာ အသငျးနိုငျပှဲရရှိဖို့ လိုအပျနခြေိနျ ပှဲပွီးခါနီး (၈၉)မိနဈမှာ လူစားလဲခဲ့တုနျးကလညျး သူ့ကိုမရှေးခယျြပဲ ဖရကျကိုသာရှေးခယျြခဲ့တာကွောငျ့
ဗနျဒီဘိချဟာ အရံခုံပျေါမှာထိုငျရငျး သူ့ပါးစပျထဲကပီကကေို ဒေါသတကွီး ထှေးထုတျပဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျဟာလညျး မီဒီယာတှပေျေါမှာ သတငျးတှဖွေဈခဲ့သလို ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ဗနျဒီဘိချ အသငျးပွောငျးရှသှေ့ားနိုငျတယျဆိုတဲ့ ယူဆခကျြ ဟာလညျး သတငျးတဈခုထပျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးပရိသတျတှရေဲ့ အမုနျးဆုံးနညျးပွဖွဈတဲ့ ဗနျဂါးလျ ဟာနယျသာလနျအသငျးရဲ့နညျးပွအဖွဈ ပွနျလညျရောကျရှိနခေဲ့ခြိနျဖွဈတာကွောငျ့
သူဆုံးဖွတျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးထဲကနေ ဗနျဒီဘိချကို လကျရှေးစငျ ကစားသမားစာရငျးထဲကခနျြလှပျခဲ့ပါတယျ။
အဓိပ်ပါယျကတော့ ပှဲထှကျခှငျ့မရတဲ့ ကစားသမားကို နိုငျငံ့လကျရှေးစဉျအသငျးမှာ နရောမပေးနိုငျဘူး နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ကစားခငျြတယျဆိုရငျ ယူနိုကျတကျကနေ ရှတေ့ော့ဆိုတဲ့ အထာပါပဲ။
ဗနျဒီဘိချအနနေဲ့ နိုငျငံ့လကျရှေးစငျ ကစားသမားအဖွဈရှေးခယျြခံရဖို့ဆိုရငျ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ လိုအပျနခြေိနျမှာ
သူ့ကို ထပျမံထိုးနှပျလိုကျသလို ဖွဈခဲ့တာကတော့ အဲဗာတနျနဲ့ပှဲအတှကျ ပှဲကွိုသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဆိုးလျရှားပွောခဲ့တဲ့ ပွောကွားခကျြတှပေါပဲ။
ဆိုးလျရှားက “ ဗနျဒီဘိချ စိတျပကျြနရေတာကို ကြှနျတျောနားလညျပါတယျ။ ကစားသမားတိုငျးကတော့ အသငျးအတှကျ ကစားပေးခငျြကွတာခညျြးပါပဲ။
အခု ကြှနျတျော စီမံနရေတာက နိုငျငံတကာ လကျရှေးစငျအဆငျ့ ကစားသမားတှဖွေဈပွီး မတူကှဲပွားတာတှကေို လုပျပွ၊ ကစားပွနိုငျကွတဲ့ သူတှကွေီးပါပဲ။
သူတို့အားလုံးက ကှငျးထဲမှာဝငျကစားခှငျ့ရခငျြနကွေပါတယျ ”
“ ဒီလို ကစားသမားတှအေားလုံးကို စီမံနရေတာဖွဈလို့ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး အတူတူအောငျမွငျမှုရခငျြတယျဆိုရငျ
ပှဲထှကျခှငျ့မရလို့ စိတျညဈနစေရာမလိုပဲ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ စှမျးရညျတှေ ရှိနဖေို့လိုအပျပါတယျ။
ဒှနျနီက ဗီလာရီးရဲယျနဲ့ပှဲမှာ ဝငျကစားဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနခေဲ့သလို အခွားကစားသမားတှလေညျး ဝငျကစားခှငျ့ရသငျ့ပါတယျ။
ဒီအသငျးမှာ ကြှနျတေျာ့လောကျ လူစားဝငျကစားသမား ဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ”
“ တဈခါတလမှော ကြှနျတျောလညျး လူစားဝငျကစားသမားဖွဈရတာ ဘယျပြျောနိုငျပါ့မလဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါက နညျးပွရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြပဲလေ။
အဲလကျဈတဲလကျဈက ဘယျနောကျခံလူဖွဈတာကွောငျ့ သူ့ကို လူစားလဲတဲ့အခါမှာ အသငျ့တျောဆုံးက ဖရကျဒျပါပဲ။
ကစားသမားတိုငျးက ပှဲထဲဝငျကစားဖို့ စိတျအားထကျသနျနကွေတယျဆိုတာ ကြှနျတျောနားလညျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအတှကျ ကိုယျ့ရဲ့စှမျးအငျနဲ့ ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးတှဘေယျလောကျအထိရှိတယျဆိုတာ ကြှနျတေျာ့ကို ပွသနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒါကလညျး ဗနျဒီဘိချမှ မဟုတျဘူး အသငျးက ကစားသမားတိုငျးပါပဲ။ ”
“ ကြှနျတျောတို့အသငျးမှာ အပကျြသဘောဆောငျတဲ့ စိတျကောကျတတျသူတှရှေိနလေို့မရပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ဗနျဒီဘိချကတော့ အသငျးကို အနှုတျသဘောဆောငျစတေဲ့ ကစားသမားမြိုးတဈခါမှမဖွဈခဲ့ဖူးပါဘူး။
တကယျလို့မြား ကစားသမားတှကေ အသငျးအပျေါ မကောငျးတဲ့ သဘောဆောငျလာခဲ့မယျ ဆိုရငျတော့ ကြှနျတျော ဒီထကျပိုပွီးပွတျပွတျသားသားကိုငျတှယျသှားမှာပါ”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ဗနျဒီဘိချ အသငျးပွောငျးရှသှေ့ားနိုငျတယျဆိုတဲ့ သတငျးက ပိုမိုခိုငျမာလာခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျပရိသတျတှအေတှကျတော့ ဒီသတငျးဟာ စိတျပကျြစရာဖွဈနတော အသအေခြာပါပဲ။
မနှဈက ယူနိုကျတကျကို ဗနျဒီဘိချ ရောကျလာခြိနျ ကနေ သူကစားခှငျ့ရဖို့ ပရိသတျတှကေ အမြားကွီးမြှျောလငျ့ခဲ့သလို
သူကလညျး ကစားရတဲ့ပှဲတှမှော ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပှဲထှကျခှငျ့မပေးတဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုနားမလညျနိုငျအောငျဖွဈနရေပါတယျ။
ဗန်ဒီဘိခ်ကို ဆိုးလ်ရှား ဘာတွေမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာလဲ…?
ပွဲထွက်ခွင့်လည်းမရ၊ အရံကစားသမားအနေနဲ့လည်း နောက်ဆုံးမိနစ်မှာတောင် ကစားခွင့်မပေးတဲ့အပြင် ကစားခွင့်ရခြင်ရင် ထိုက်တန်တဲ့ ခြေစွမ်းပြရမယ်ဆိုတော့
ဗန်ဒီဘိခ်အပေါ် ဆိုးလ်ရှားလုပ်ရပ်ကတော့ အတော့်ကိုများနေပြီ…
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာတုန်းက ဆိုးလ်ရှားရဲ့စကားကို ယုံကြည်ပြီး အသင်းမပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ အရံခုံထိုင်ကစားသမားဘဝကိုအတော်စိတ်ပျက်နေခဲ့ပါပြီ။ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ ပွဲမှာ အသင်းနိုင်ပွဲရရှိဖို့ လိုအပ်နေချိန် ပွဲပြီးခါနီး (၈၉)မိနစ်မှာ လူစားလဲခဲ့တုန်းကလည်း သူ့ကိုမရွေးချယ်ပဲ ဖရက်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့် ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ အရံခုံပေါ်မှာထိုင်ရင်း သူ့ပါးစပ်ထဲကပီကေကို ဒေါသတကြီး ထွေးထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာလည်း မီဒီယာတွေပေါ်မှာ သတင်းတွေဖြစ်ခဲ့သလို ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဗန်ဒီဘိခ် အသင်းပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက် ဟာလည်း သတင်းတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ အမုန်းဆုံးနည်းပြဖြစ်တဲ့ ဗန်ဂါးလ် ဟာနယ်သာလန်အသင်းရဲ့နည်းပြအဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိနေခဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သူဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးထဲကနေ ဗန်ဒီဘိခ်ကို လက်ရွေးစင် ကစားသမားစာရင်းထဲကချန်လှပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ ကစားသမားကို နိုင်ငံ့လက်ရွေးစဉ်အသင်းမှာ နေရာမပေးနိုင်ဘူး နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကစားချင်တယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက်ကနေ ရွေ့တော့ဆိုတဲ့ အထာပါပဲ။
ဗန်ဒီဘိခ်အနေနဲ့ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင် ကစားသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ လိုအပ်နေချိန်မှာ သူ့ကို ထပ်မံထိုးနှပ်လိုက်သလို ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အဲဗာတန်နဲ့ပွဲအတွက် ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှားပြောခဲ့တဲ့ ပြောကြားချက်တွေပါပဲ။
ဆိုးလ်ရှားက “ ဗန်ဒီဘိခ် စိတ်ပျက်နေရတာကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ကစားသမားတိုင်းကတော့ အသင်းအတွက် ကစားပေးချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ အခု ကျွန်တော် စီမံနေရတာက နိုင်ငံတကာ လက်ရွေးစင်အဆင့် ကစားသမားတွေဖြစ်ပြီး မတူကွဲပြားတာတွေကို လုပ်ပြ၊ ကစားပြနိုင်ကြတဲ့ သူတွေကြီးပါပဲ။ သူတို့အားလုံးက ကွင်းထဲမှာဝင်ကစားခွင့်ရချင်နေကြပါတယ် ”
“ ဒီလို ကစားသမားတွေအားလုံးကို စီမံနေရတာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတူတူအောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဆိုရင် ပွဲထွက်ခွင့်မရလို့ စိတ်ညစ်နေစရာမလိုပဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒွန်နီက ဗီလာရီးရဲယ်နဲ့ပွဲမှာ ဝင်ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သလို အခြားကစားသမားတွေလည်း ဝင်ကစားခွင့်ရသင့်ပါတယ်။ ဒီအသင်းမှာ ကျွန်တော့်လောက် လူစားဝင်ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ”
“တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်လည်း လူစားဝင်ကစားသမားဖြစ်ရတာ ဘယ်ပျော်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါက နည်းပြရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေ။ အဲလက်စ်တဲလက်စ်က ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကို လူစားလဲတဲ့အခါမှာ အသင့်တော်ဆုံးက ဖရက်ဒ်ပါပဲ။ ကစားသမားတိုင်းက ပွဲထဲဝင်ကစားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေဘယ်လောက်အထိရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို ပြသနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဗန်ဒီဘိခ်မှ မဟုတ်ဘူး အသင်းက ကစားသမားတိုင်းပါပဲ။ ”
“ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ကောက်တတ်သူတွေရှိနေလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗန်ဒီဘိခ်ကတော့ အသင်းကို အနှုတ်သဘောဆောင်စေတဲ့ ကစားသမားမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ တကယ်လို့များ ကစားသမားတွေက အသင်းအပေါ် မကောင်းတဲ့ သဘောဆောင်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီထက်ပိုပြီးပြတ်ပြတ်သားသားကိုင်တွယ်သွားမှာပါ”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဗန်ဒီဘိခ် အသင်းပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဒီသတင်းဟာ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတာ အသေအချာပါပဲ။ မနှစ်က ယူနိုက်တက်ကို ဗန်ဒီဘိခ် ရောက်လာချိန် ကနေ သူကစားခွင့်ရဖို့ ပရိသတ်တွေက အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့သလို သူကလည်း ကစားရတဲ့ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲထွက်ခွင့်မပေးတဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။